$ 90 bilyan oo raqiis ah oo raqiis ah: Subway -ka ayaa ku jees jeesay dhibaatadii bad -mareenka Faransiiska
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Mareykanka » $ 90 bilyan oo raqiis ah oo raqiis ah: Subway -ka ayaa ku jees jeesay dhibaatadii bad -mareenka Faransiiska
Wararka Australia • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • kariska • Wararka Faransiiska • Wararka Dowladda • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka UK • Wararka Mareykanka
Muuqaal aad u qurux badan, Subway wuxuu qodanayaa qarashkii ku baxay heshiiskii bad-mareenka Australia ee Faransiiska, ka hor inta Canberra aysan taageerin in laga helo maraakiibta quwadda nukliyeerka ee Mareykanka.
Australia ayaa baajisay heshiis S-90-bilyan ah oo badda hoosteeda marayay oo ay la gashay Faransiiska iyada oo doorbiday heshiis kale oo lala galo USA.
Faransiiska ayaa dib ugu yeeray danjirayaashiisii ​​Australia iyo Mareykanka labadaba Jimcihii iyaga oo ka jawaabaya wax ay ku tilmaameen "dhaqan aan la aqbali karin oo u dhexeeya xulafada iyo shuraakada".
Tareenka dhulka hoostiisa mara waxa uu ku faanay in ay leedahay “quwad aan nukliyeer ahayn” oo “90 bilyan oo doollar ka jaban”.
Si qosol leh u jees jeesa heshiiskii badda hoosteeda ee Faransiiska iyo Australiya ayaa khaldamay, silsiladda cuntada degdegga ah ee Mareykanka Subway ayaa sii daayay xayeysiin qosol leh oo loogu talagalay sanduuqyadeeda, iyagoo ku faanaya inay leedahay "quwad aan nukliyeer ahayn" oo "$ 90 bilyan ka jaban".
Go'aanka Australia ee lagu joojinayo AUS $ 90-bilyan oo ah amar-hoosaadyo bad-hoosaad badan oo lala yeeshay Faransiiska ayaa keenay bog buuxa Wadohoose xayaysiis lagu daabacay wargeyska The Age maanta, isagoo qodanaya qarashkii ku baxay heshiiskii bad-mareenka Australia ee Faransiiska, ka hor inta Canberra aysan taageerin inay ka hesho Maraykanka maraakiibta quwadda nukliyeerka ku shaqeeya.
In kasta oo dad badan oo adeegsada baraha bulshada ay xayeysiiska u arkeen mid xariif ah oo qosol leh, kuwa kale waxay u arkeen inuu yahay "karaahiyo" iyo ixtiraam darro.
Hal isticmaale ayaa xitaa lagu eedeeyay WadohooseXayeysiiska “gadoodsan” ee “adeegsiga [fikradda] dhimashada guud si loo iibiyo cunto fudud,” iyadoo la tixgelinayo sida ugu dhow ee dagaalka Shiinaha, Australia, iyo Mareykanka ay u muuqdaan.
Faransiiska ayaa dib ugu yeeray safiirkeediiAustralia iyo Mareykanka labadaba Jimcihii iyaga oo ka jawaabaya wax ay ku tilmaameen "dhaqan aan la aqbali karin oo dhex mara xulafada iyo shuraakada" taasoo ka dhalatay heshiiska AUKUS (Australia, United Kingdom, United States).
Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa lagu soo warramayaa in lagu wargeliyay oo keliya go’aanka Australia ee ah inay si degdeg ah uga baxdo heshiiskii badda hoosteeda ee labada dal ee 2016 ka hor intaan warku soo shaac bixin.
Jean-Yves Le Drian, oo ah wasiirka arrimaha dibadda ee Faransiiska, ayaa ku tilmaamay go'aanka "dhabarka ka mudac, ”Waxay ka digayaan in“ cawaaqibkoodu saamayn ku yeesho fikirka aan ka haysanno xulafadeenna, iskaashigeenna iyo muhiimadda Indo-Pacific ee Yurub. ”
Australia waxay qiil uga dhigtay ka bixitaankeedii heshiiska ay la gashay Faransiiska iyadoo ku andacoonaysa in qarashku uu noqday mid ka sarreeya sidii markii hore la filayay.